Muqdisho: IGAD oo fariin cad gaarsiisay Madaxweynaha Soomaaliya
Ergayga gaarka ah ee Urur gobaleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Max’ed Cabdi Afey ayaa si deg deg ah usoo gaaray magaalada Muqdisho, isagoo la kulmay Madaxda dawladda Soomaaliya oo ay ka wada hadleen arrimaha Doorashada dalka ee lafilayo in ay dhacdo sannadkan gudihiisa.
Ergayga ayaa u gudbiyey Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya & Gudoomiyaha baarlamaanka, fariin uu ka sidey Urur gobaleedka IGAD, taas oo aah in aan waxba waqti ah lagu dari doonin mudada xil heynta hay’addaha dawladda Soomaaliya.
Mr, Afeey ayaa warqaddan gudoonsiiyey Madaxda dawladda Soomaaliya, oo hadda isku haya hanaanka doorashada, gaar ahaana mudo kororsi ay doonayaan shaqsiyaadka ugu sareeya dawladda Faderaalka.
Ergaygu wuxuu u sheegay in aysan IGAD iyo dawladdaha jaarka ah aqbaleyn kudarsi ay sameystaan Madaxda dawladda Soomaaliya, ayna doonayaan oo kaliya in meelmar laga dhigo Heshiisyadii lagu gaaray Garoowe iyo Muqdisho bishii April ee lasoo dhaafay, kuwaas oo dhabaha u xaaraya doorasho ka dhacda Soomaaliya.
Fariinta IGAD waxay ku soo beeganay xili madaxda dawladda Soomaaliya, gaar ahaana Madaxweynaha & Gudoomiyaha baarlamaanka ay doonayaan in mudo dheeraad ah lagu daro waqtiga doorashada Soomaaliya, laakiin taasi waxaa si weyn uga soo horjeeda Beesha Caalamka & dawladdaha jaarka ah.